ရောင်းရန် crusher feed ကို,ငါးများအတွက်တိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ်စက်,တိရစ္ဆာန်များ,သိုး
မော်ဒယ်:VTSP56 * 36
feed crusher machine သည်ပစ္စည်းများကိုကြီးမားသောအမှုန့်များအဖြစ်ခွဲရန်အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်. အများအားဖြင့်သွားနှင့်တူသောဓါးသွားများဖြင့်ကြေကွဲရသောအရာများသည် ၀.၆ မှ ၁.၅ မီလီမီတာဖြစ်သည်; သွားနှင့်အံသွားများကို ၁.၂.၅ မီလီမီတာရှိသောကြောင့်ကြိတ်ခွဲစက်သည်အမြန်နှုန်းတူနှင့်ပစ္စည်းများအကြားတိုက်မိခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းများကြိတ်ခွဲရာတွင်အထူးပြုစက်ဖြစ်သည်။,တိရိစ္ဆာန်အစာများတပ်ဆင်သည့်စက်သည်မြန်နှုန်းမြင့်တူနှင့်ပစ္စည်းများအကြားတိုက်မိခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲရာတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသောစက်ဖြစ်သည်. feed crusher ရှိကုန်ကြမ်းများကိုသင့်တော်သောအမှုန်အရွယ်အစားအဖြစ်ကြေမွသည် feed mixer စီတန်းလှည့်လည်. ကွဲပြားသောအရွယ်အစားရှိသောအပေါက်များနှင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးအရွယ်အစားပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်. အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူ, ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု, တိရိစ္ဆာန်အစာများစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်လယ်ယာတွင်အသုံးပြုသည်, အလယ်အလတ်စားကျက်စားစက်ရုံသို့မဟုတ်မိသားစုအသုံးပြုရန်.
feed crusher machine တွင်အားသာချက်များရှိသည်
●အဓိကအစိတ်အပိုင်းတူများကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အရာအကြမ်းခံနှင့် wear- ခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့်ကြာရှည်ခံမှု.
တိရိစ္ဆာန်အစာများကြိတ်ခွဲစက်ကိုကျယ်ပြန့်စွာစိုက်ပျိုးသည်, အလယ်အလတ်စားနို့တိုက်ကျွေးရေးစက်ရုံသို့မဟုတ်မိသားစုအသုံးပြုရန်. ဤအစာကျွေးခြင်း grinder အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမှုန်လျှော့ချရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်:
♦စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်, ပြောင်း, ပြောင်းဖူးအညှာ, မြေပဲခွံ, မြက်ခြောက်, ဝါဂွမ်း, စသည်တို့;
♦ဆေးဝါးနှင့်စက်မှုပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်ဆေးပညာကောက်ပဲသီးနှံများအဖြစ်, လင်းကျောက်, ကျောက်မီးသွေး, ကျောက်မီးသွေးအကြွင်းအကျန်, တောအုပ်, စသည်တို့
feed crusher အတွက်ကုန်ကြမ်း အစာကျွေးခြင်းရောနှောစီတန်းများအတွက်သင့်လျော်သောအမှုန်အရွယ်အစားသို့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရကြသည်. ကွဲပြားသောအရွယ်အစားရှိသောအပေါက်များနှင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးအရွယ်အစားပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်. အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူ, ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု, တိရစ္ဆာန်အစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်လယ်ယာတွင်အသုံးပြုသည်, အလယ်အလတ်စားကျက်စားစက်ရုံသို့မဟုတ်မိသားစုအသုံးပြုရန်.
မော်ဒယ် VTSP56 * 30 VTSP56 * 36 VTSP56 * 40 VTSP60 * 45
feed crusher စက်၏ဗီဒီယို